အခြေခံဥပဒေနဲ့ ကိုင်ပေါက်ခြင်း | ဧရာဝတီ
ဇာနည်ဝင်း| June 29, 2012 | Hits:15,981
11 | | တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို အခုတလော ဓာတ်ကျ နေသူတွေထဲမှာ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်လည်း ပါဝင်လာတာ ဒီကနေ့ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။
ကော်မရှင်က ဒီကနေ့ သတင်းတပုဒ် ထုတ်ပြန်ရာမှာ နိုင်ငံအမည်ကို Myanmar လို့ ခေါ်ဖို့ လိုအပ်တယ်၊ ဒါမှ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဒီလ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဥရောပ ခရီးစဉ်မိန့်ခွန်းတွေမှာ Burma လို့ပဲ ပြောပြော သွားတာဟာ အခြေခံဥပဒေနဲ့ ဆန့်ကျင်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အလုပ် အရမ်းကြိုးစားပါလားလို့ ချီးကျူးခံရနိုင်သလို၊ Burma လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောနေတာ ကြာလှပြီဆိုတာ မသိဘူးလား၊ ဘယ်မှာသွား အိပ်ပျော်နေတာလဲ၊ ဘာကြောင့် အခုမှ ကန့်ကွက်ရတာလဲလို့ မေးခွန်းထုတ်ခံရဖွယ် ရှိပါတယ်။
Myanmar လို့ ခေါ်ဖို့ အခြေခံဥပဒေမှာ ပြဋ္ဌာန်းထားတယ် လို့ ကော်မရှင်က ဆိုပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကလည်း သူတို့ စိမ်ပြေနပြေ စိတ်ကြိုက် ရေးဆွဲထားတဲ့ အခြေခံဥပဒေ ဆိုတာကြီးနဲ့ ကိုင်ကိုင်ပေါက် ရတာကို အင်မတန် အရသာတွေ့ဟန် တူပါရဲ့။
အခြေခံဥပဒေ ဖတ်ဖူးသူတချို့ကလည်း “ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဟု ခေါ်တွင်ရမည်” လို့ပဲ ပြဋ္ဌာန်းထားတာ မှန်တယ်၊ The Republic of the Union of Myanmar လို့ အင်္ဂလိပ် ဘာသာပြန်စာအုပ်မှာ ပြဋ္ဌာန်းထားတာလည်း မှန်တယ်၊ ဒါပေမယ့် အခန်း ၁၅ ဆိုတဲ့ နေရာမှာတော့ စကားလုံး တလုံးချင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို “မြန်မာစာဖြင့် ရေးသား ထားချက်များ အပေါ်တွင်သာ အခြေပြုရမည်” လို့ ဆိုနေကြတယ်။
ဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့ လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွေ မကြာခင် ပြန်အစပြုတဲ့အခါ အခြေခံဥပဒေထဲက အဲဒီအပိုဒ်ကို တိတိကျကျ ပြင်ဆင် ရေးသားဖို့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ ပြောဆိုကြတော့မယ့် ပုံပဲ။
နိုင်ငံအမည်ပြောင်းတာဟာ လူထု (သို့မဟုတ် လူထုကိုယ်စားလှယ်တွေ) နဲ့ တိုင်ပင်ဖို့ လိုတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လက်ကိုင်ပြုထားတာ အစိုးရမင်းများလည်း သိမှာပါ။
၁၉၈၉ ခုနှစ်ကစပြီး နိုင်ငံအမည်ကို Myanmar လို့ ပြောင်းလဲခဲ့သူတွေဟာ နေရာတကာ ၀င်ပါပြီး လူတတ်ကြီးလုပ်လေ့ရှိတဲ့ စစ်ဗိုလ်ကြီးတွေပါပဲ။ မြန်မာ နဲ့ ဗမာ၊ Myanmar နဲ့ Burma ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရတွေကို မြန်မာပြည်မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆွေးနွေးငြင်းခုံတာမျိုး မရှိခဲ့ဘဲ စစ်ဗိုလ်ကြီးတွေ သတ်မှတ်ပေးသလိုပဲ ပြောဆိုသုံးနှုန်းခဲ့ရတာ ကြာပါပြီ။
သူတို့ ပြောင်းထားတဲ့ နာမည်၊ သူတို့ သေနတ်နဲ့ချိန်ပြီးဆွဲခဲ့တဲ့ အခြေခံဥပဒေ ဆိုတော့ ဒီလို ကာကွယ်ပြောဆို ရေးသားနေတာဟာ သဘာဝ ခပ်ကျကျပါပဲ။
ဟိုတုန်းကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လှုပ်ရှားပြောဆိုမှုတွေကို ကဏ္ဍကောစ လုပ်တာဟာ အစိုးရသတင်းစာတွေရဲ့ ဂျူတီပေါ့၊ အခု ဒီသတင်းစာများက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မဝေဖန်တော့ဘူး ဆိုတော့ ဒီတာဝန်ကို ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကပဲ ယူတော့မယ့် သဘောများလား၊ ဒီလိုလည်း မဟုတ်လောက်ပါဘူးလို့ ထင်ရတာပါပဲ။
ကော်မရှင်ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ကို ဖတ်ပြီး စဉ်းစားမိတာတွေ ရေးလိုက်တာပါ။ အလုပ်မရှိ အဝှာ သန်းရှာတယ်ပဲ ဆိုဆို ပေါ့လေ။ ဝေါဟာရ ပိုင်းဆိုင်ရာ ငြင်းခုန်လိုပေမယ့် ဒီလိုငြင်းခုန်ခွင့် ရှိမရှိ အခြေခံဥပဒေကို ဖင်ပြန်ခေါင်းပြန်၊ အထပ်ထပ်အခါခါ မွှေနှောက်ပြီး ပြန်လည်ဖတ်ရှု လိုက်ပါဦးမယ်။
ပြောင်းကုန်ပြီ … ပြောင်းကုန်ပြီ
ဦးရုက္ခစိုးနှင့် သင်ယူပါသည် မြန်မာပြည်
အယ်ဒီတာ ကိုတာတေနှင့် သူ၏ ကြေညာချက်
ရုက္ခစိုးနဲ့ ယမကာ မင်းသားကြီး၏ ဆန္ဒပြပွဲ
ဒီမိုကရေစီအစ ၃၇ မင်းက
19 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website Kyaw Zin Oo June 29, 2012 - 7:41 pm	The commission and Ex-SPDCs r very sensitive to 1 million Welcoming Back Campaign, Ha Ha and feels jealous and bad mood with all fame and glory that Daw Su has in Europe.
Reply	smile June 29, 2012 - 8:37 pm	think about what happened with “Oath crisis”.
Then you know already what should you expect.
No need to write down an article about it because simply waste of time.
You should have concentrated on other important things.
Reply	Maung Maung June 29, 2012 - 10:17 pm	ဘားမားလည်း ဗမာပဲ၊ မြန်မာလည်း ဗမာပဲ ။ ဘာလူလည်ကျချင်တာလည်း။ မြန်မာဆိုတာ မြန်ဆန်တိကျမာမာချာမျာသန်သန်မာမာရှိတဲ့လူမျိုးများ ဆိုပြီး အတင်းအဓမ္မဍီကာချဲ နေကြဦးမယ်။ ဗမာအပါအ၀င် တိုင်းရင်းသား၁၃၅ မျိုးကိုကိုယ်စားပြုတယ်ဆိုပြီး စစ်အုပ်ချုပ်ရေးခေတ်မှာ အတင်း သောက်ရမ်း အဓိပါပယ်ဖွင့် အတင်းသတ်မှတ်ထားခဲ့တယ်လေ။ ဘယ်သူတွေကိုများ တိုင်ပင်ခဲ့လို့လည်း။ ဘယ်သူ့သဘောထား တောင်းခံခဲ့လို့လည်း။ ဘာဘူကြီးနဲ့မာမူကြီး အာတူတူပဲ ဆိုသလိုဖြစ်နေတယ်။ ဗလချိုက် တစ်လုံးနဲ့ မြန် တစ်လုံးပဲ ကွာသွားတာပါ။ နောက်ကမာ ကတော့ အတူတူပဲ။ ညစ်ချင်တော့ ကြံဖန်ညစ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ အများလူထုသဘောထားလည်း ကောက်ခံထားခြင်းမရှိတော့ ခက်တယ်။ နိုင်ငံတော်သစ် အတွက် အမည်နာမ မှည့်ခေါ်သမှတ်ဖို့လေ။ ဗမာနဲ့ချည်းမဖြစ်ရန် အပြင် တိုင်းရင်းသားအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ခုနေတော့ ကမ္ဘာသိ အကုန်သိ လူတိုင်းသိ ကလေးလည်းသိတဲ့ ဘားမားကိုသုံးနှုန်းတာ ပြသာနာရှာနေတယ်။ ကြံဖန်နောက်ပြန်လှည့်ချင်တယ်ထင်ပ။
Reply	Maung Shet Mit (Paaradise World) July 2, 2012 - 7:51 pm	Dear Myanmar President U Thein Sein Khin-byar,
Please kindly give more duties to Commission Chairman & Team, you should not only give to them only before & during commission duties because after election, this chairman & team have nothing to do, so all of their bodies parts becoming itchy, and so they talk, comment to other people including Mother Su, like ” Ma-yaoung-yar-si-lu “. People have granted their salaries, were not only doing Commission duties but also they should do country development such as: education, health, economic, etc. Now all Burmese people are very very poor than other countries, This Commission Chairman & team should do State other duties, So President should order and assign3in 1,4in 1 duties, if not they become lazy and comment to other people working people like Mother Su, and other democracy parties, they are cheating on our country, only doing Commisssion Duties, President should only give 100,000.00 Kyats enough for him, President should not give more salary to him, also his commission group member, after commission, they have nothing to do, President Only give salary 100,000.00 Kyat to Chairman, and only 50,000.00 Kyats to Commission members, so we can save money (budget) on like this blurred people. Please be careful on like this “Ma-young-yar-si-lu” commission chairman & group.
Reply	ဦးမြတ် July 2, 2012 - 10:46 pm	တလောက ဂျာနယ်တစ်ခုမှာ မြန်မာလူမျိုး၊ မြန်မာနိုင်ငံလို့ ပညာရှိကြီးတစ်ပါးက ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီပညာရှိကြီးမှာ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်(မှတ်ပုံတင်)မရှိလေရော့သလား
မသိပါ။ ယနေ့တရားဝင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်မှာ လူမျိုး ဗမာလို့အတိအလင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ မြန်မာလို့မရေးပါဘူး၊
Reply	Punisher July 4, 2012 - 1:57 am	ကွယ်လွန်သွားတဲ့ အဖွားပြောလေ့ရှိတဲ့စကားလေးတခွန်းသတိရမိတယ် ။ သူ့မြေးတွေဖြစ်တဲ့ကျနော်တို့အရေးမပါ အရာမရောက်တွေ ပြောဆိုလုပ်ကိုင်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့ ။ (( အလုပ်မရှိ –ဥ သန်းရှာနေတယ် တဲ့ ))
Reply	XXX July 17, 2012 - 5:33 pm	ဗမာဆိုတာလူမျိုးတစ်မျိုးကြီးတစ်မျိုးထဲကိုပဲကိုယ်စားပြုတယ်။ မြန်မာဆိုမှ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများစွာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ နိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုပြီးပြောချင်တယ်ဆိုရင် မြန်မာလို့သုံးစွဲမှ အမှန်ပါ။
Reply	zinzin August 11, 2012 - 12:16 am	တချို့ အကြောင်းအရာတွေမှာ လူသိများတဲ့ နာမည်ကိုပဲသုံးမှ ပြောတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာထိရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကို ပညာရှိတဲ့သူက သိလို့ လုပ်တာပါ။ ဝေါဟာရ အသုံးအနှူန်းကရေးကြီးလား ပြောတဲ့စကားထိရောက်ဖို့အရေးကြီးလား။
Reply	Yangonite November 10, 2012 - 9:04 am	Can you please exactly tell everyone here who in the world left the definition of such statements?
Reply	watt pouk July 17, 2012 - 7:58 pm	American နယူးကလီးယားဘုံးကို မကြောက် ကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဘာမှန်းမသိတဲ့ မမြင်ရတဲ့ တည်ဆဲဥဗဒေ ကိုပဲကြောက်တယ်။ငယ်ငယ်တုန်း အဖိုးချောက်တဲ့ မမြင်ဘူးတဲ့ သရဲကိုကြောက်နေရသလိုပါပဲ။
Reply	အောင်အောင် July 17, 2012 - 9:33 pm	အော် အမျိုးသားရေးနဲ့ နိုင်ငံရေး ခွဲမမြင်တဲ့သူတွေပါလား
Reply	Myanmar is better August 3, 2012 - 3:54 pm	Myanmar isasovereign country. It hasaright to be named itself or to be addressed by the others. In fact, the government did not change the name, it just changed the way how to spell in English. It wants the name to be spelt in the way we normally pronounce not the otherwise. we call Yangon as Yan gon, not Rangoon as the way English people pronounces. Many other examples Pyay-Prome, Pathein-Basssein, Sittwe- not Akyab. People hear sound differently and reproduce in writting differrently. English write dog barking as arf-arf not the way we write as wot-wot in Myanmar wiritng. Burmese, Rangoon, Bassein etc. were the words used by English people in writting when they heard these names in their way.
In fact, countries have changed their name or spelling in English. Everyone accepted, no objection. Bombay- Mumbai, Peking- Beijing, Siam-Thailand- Thai, Kampuchea-Cambodia, many other examples.
Reply	Yangonite November 10, 2012 - 9:16 am	Yes, every country has that right but in our case, who exactly changed our country’s name? Don’t you know or are you pretending to suffer from amnesia? Be it in English or Burmese, do you think it is right to change the name of the country without getting the consent of the citizens? Do you think everyone has to accept it just because the thugs in green garb said so? You think China is what the Chinese people call themselves in Mandarin? Or for that matter, Japan as well?
Reply	yinmoesan August 10, 2012 - 9:03 am	စစ်အစိုးရမင်းကြီးတို့ ခင်ဗျားတို့အပေါင်းအပါတွေဖျက်ဆီးလို့ မြန်မာပြည်ယိုပေါက်ကပြသနာ
တွေ၊အဂတိလိုက်စားလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စီမံကိန်းတွေ နောက်ဆက်တွဲပြသနာကိုတစ်နေ့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမှာက နောက်ပိုင်းအစိုးရတွေအတွက်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေမှာတော့သေချာနေပါပြီ။
Reply	shwegaung August 21, 2012 - 3:12 pm	အားဂတိလိုက်စားခဲ့တဲ့ အကောင်တွေစုံစမ်းဖော်ထုတ်ပေါ့
Reply	ကိုမျိုး August 13, 2012 - 10:14 am	Burma လို့ပဲပြောပြော၊ Myanmar လို့ပဲပြောပြော အတူတူပါပဲ။ ကမ္ဘာ့အလည်မှာ ဒေါ်စု ကိုသိက္ခာချချင်တဲ့သဘောပါ။ ဒေါ်စု သိက္ခာမကျဘဲ သူတို့အဖွဲ့ရဲ့သိက္ခာက ကုန်းကောက်စရာ မရှိအောင်ကိုကျသွားတာပါ။
Reply	Sao Khun Wan August 22, 2012 - 7:12 am	When we got independence it was Burma not Myanmar. When colonial British gave independence, it was Burma not Myanmar. How, When and Why this Myanmar comes from……..????? during the regime of brutal ruler who spoiled everything of Burma the culture, the life style and the whole entire national pride, finally even the name of the country BURMA. That must be the reason, Burma in the hand or regime of that ruler was totally destructed into debris and no more in existence. There only left garbage and debris in the international norms which they named Myanmar in their home made in house customized constitution.
Reply	ရိုဟင်ဂျာ August 26, 2012 - 3:10 am	၀ကို တအားဆွဲချင်ဆွဲ ၀..ကတော့..မျှင်တင့်လို့ခေါ်မယ်
Reply	Rosy September 5, 2012 - 12:17 pm	ဗမာအများစုကတော့ ဒီကနေ့အထိ မြန်မာနဲ့ ဗမာအဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက်အပေါ် အငြင်းပွားနေကြတုံး….တိုင်းရင်းသားအများစုကတော့ မြန်မာ၊ ဗမာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အပေါ် စိတ်ဝင်စားမှုဟန်လုံးဝ မရှိကြတော့ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဗမာ၊ မြန်မာ ၂ ခုစလုံးက တိုင်းရင်းသားအားလုံးကို မခြုံငုံနိုင်လို့ပါပဲ။ ဒါကြောင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအားလုံးကို ခြုံငုံခေါ်နိုင်မယ့် အမည်နာမ တခုကို ရွေးချယ်ဖို့ သူတို့အလိုရှိပါတယ်။ ဗမာ၊ မြန်မာ အမည်နာမအပေါ် အငြင်းပွားနေကြမယ့်အစား…ပြည်ထောင်စုလို့ ခံယူထားရင် တိုင်းရင်းသားတွေလိုလားနေတဲ့၊ အားလုံးကို ခြုံငုံနိုင်မယ့် အမည်နာမမျိုး ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ဖို့ အချိန်တန်ပါပီ။
ဧည့်လမ်းညွှန် ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ မသြောင်မေဆန်း
ကြက်သားကာလသားချက်၊ လစ်ပတန်တီးနဲ့ ခေတ်ပျက်သူဌေးလေး ဖတ်ဖို့ မေတ္တာစာ
ဆန့်ငင် ဆန့်ငင် ဦးရုက္ခစိုး